Umkhakha ongakahleleki, injini yokubandakanya ehlanganiswe nezimo kwezomnotho zase-Afrika. - Afrikhepri Foundation
Umkhakha ongakahleleki, injini yentuthuko ehlanganyelwe yathinteka ekuthuthukiseni umnotho wase-Afrika.
Funda: 6 amaminithi
Dn amazwe athuthukile, sekuwumkhuba ukubheka izimakethe zabasebenzi njengendawo lapho ukuhlangana nokudingayo kuhlangana khona. Kodwa-ke, endaweni yase-Afrika lapho ukuzisebenzela kanye namabhizinisi amancane kubandakanya indlela enkulu yokuhlanganiswa emakethe yezabasebenzi, wona kanye umngcele phakathi kokulethwa kwabasebenzi kanye nesidingo uyafiphala.
Ukungajwayelekile kuyinto evamile e-Afrika.
Umkhuba ungumngcele ezihambayo. Umkhuba ngempela unesimo se-axiological okufanele sicatshangelwe futhi sihlonishwe. Kuyinto efanayo nakwezomnotho wase-Afrika, othuthukayo, ngandlela-thile emkhakheni ongakahleleki. Kulokhu kuhlaziywa, akusiyo umbuzo wokuxolisa ngolwazi kodwa ukuveza ukuthi kuyindlela yokuthuthukiswa okubandakanya nokuguqulwa kwesakhiwo se-Afrika.
Umdwebo we-1: I-6 yezomnotho okukhula okusheshayo kwe-10 i-Afrika. @CI, 2018
Ngokwe-International Monetary Fund (I-IMF), i-6 ye-10 imnotho esheshayo e-2018 itholakala e-Afrika. I-Ethiopia ne-8,3% ukukhula, uhola umnotho onamandla kakhulu, ilandelwa yiGhana , ngokusho kwesibikezelo se-IMF. Ukuvuselelwa komnotho kuyaqhubeka kulo lonke elase-Afrika eseningizimu yeSahara lapho kungumkhakha ongakahleleki oqhuba futhi uhambise ushintsho. Futhi njengoba esinye isifundo sifakazela kusuka ku-French Development Agency (AFD):
“Imisebenzi eminingi emazweni asathuthuka (DCs) itholakala emnothweni ongakahleleki […]. Singaze sicabange ukuthi ubunzima bezomnotho emhlabeni buqinisa isisindo somkhakha ongakahleleki ngenxa yokulahleka kwemisebenzi okuthinta eminye imikhakha yemisebenzi yezomnotho. Ukuqonda okungcono ukusebenza komnotho wala mazwe ngakho-ke kudinga ulwazi olungcono lomkhakha ongakahleleki. "
Ngabe ukukhuthaza umkhakha ongakahleleki kungaba nenzuzo enkulu?
Izisebenzi eziningi kanye nezinyunyana zomnotho zikhetha ukubalekela ukulawulwa kombuso ngoba kuzoba kubi kakhulu ukuba zihambisane nomthetho. Futhi ezimweni eziningi, ukuphoqa ukuba bahambisane nale mithetho ngeke kubangele ukusebenza kahle komnothongisho noma bezofaka isandla ekuxhaseni izimpahla zomphakathi abazizuzayo. Kubalulekile ukucabangela lokhu okuyiqiniso futhi ukugwema umbono ojwayelekile wokusebenza lapho kuhlaziywa izimakethe zabasebenzi e-Afrika engaphansi kweSahara.
Umdwebo 2: Izehlakalo zokuqashwa okungahlelekile yisifunda
Njengoba kubonakala kulolu nani, umkhakha ongakahleleki ukhiqiza imisebenzi eminingi kunomsebenzi osemthethweni eLatin America, e-Asia nase-Afrika. EGibhithe, isibonelo, inani labasebenzi emkhakheni we-informal lilingana nalokhu emkhakheni ongakahleleki. umphakathi. Kuyinto yokuphila ngokubhekene nezinkinga zemisebenzi. E-Senegal, I-General Census of Enterprises (RGE) eshicilelwe ekupheleni kwekota yokuqala yonyaka we-2017, kwabangaba ngu-407 "amayunithi wezomnotho" abaliwe, abangaphezu kwengxenye benza umsebenzi wabo kwezentengiselwano. Kodwa-ke, "ngaphezu kuka-000% kungobunikazi obunikazi bodwa futhi i-96% yamayunithi ezomnotho abhalwe ohlwini awakahlelekile". Ukungahleleki ngakho-ke kubalulekile ekulweni nobuphofu.
« Imakethe yezabasebenzi esebenza kahle ayiyona into efana nemakethe yomsebenzi ehlelekile»
kulokhu, uMartin Rama, uMqondisi we-2013 World Development Report, esanduleleni sakhe sencwadi ye-AFD emakethe yemisebenzi yasemadolobheni ase-Afrika engaphansi kweSahara.
Impela, iningi lemisebenzi yezomnotho e-Afrika ayenziwa ngokwasemthethweni, ilandelwa yimisebenzi yezinhlaka zikahulumeni. Ukungajwayelekile kuyinto evamile. Lolu wudaba olukhulu ngoba ukungabanaki abasebenza ezimakethe ezingakahleleki ukuzibeka engcupheni yezenhlalo nezepolitiki; “njengoNtwasahlobo wama-Arabhu” wango-2011, owaqala eTunisia ngokuzibulala komuntu othengisa emgwaqeni ngokuthengisa izithelo nemifino ephathwa kabi ngamaphoyisa.
Ngabe imfundo iyaba nomthelela ekuqondisweni komkhakha ongakahleleki?
Imisebenzi engakahleleki ayikhona nje ngamasu okusinda kodwa ngokukhetha okukhululekile nokuqaphela abantu base-Afrika. Kunenombolo real micro-osomabhizinisi. Ngakho-ke kuyoba okuthakazelisayo ukwazi ukuthi izinga lemfundo, ngakho-ke kuthonya lokhu kubhekiswa emnothweni osemthethweni. Ngamanye amazwi, ngabe abasebenzi abasemkhakheni ongakahleleki balapho ngamabomu noma ingabe iwukumisa phansi, isondo eliyisipele uma ingekho indlela yokuphuma emkhakheni kahulumeni nowangasese?
UPierre Tegoum, uzobheka lolu daba, njengomhlahlandlela wokuhlaziya eCameroon. Kubonisa ukuthi imfundo idlala indima ebalulekile esimweni sobuchwepheshe sabasebenzi baseCameroon. Ukuhlanganiswa emkhakheni ongakahleleki kuncike ikakhulukazi ngokomongo womndeni. Ngaphezu kwalokho, amathuba okungena emkhakheni we-informal wehla ngemfundo, kanti amathuba okungahlali futhi angene emkhakheni ohleliwe ngokukhula kwemfundo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthuthukisa ukufinyeleleka kanye nekhwalithi yemfundo, okungenani kuze kube umjikelezo wokuqala wemfundo yesibili.
Inhloso yethu kwakuwukukhombisa ukuthi umkhakha ongakahleleki ungumvuthwandaba wokuthuthukiswa kwendawo kanye nokuhlanganiswa okuphansi e-Afrika. Ukwenziwa kwalo kungabangela ukuguqulwa kwesakhiwo futhi esimeme we-Afrika. Abenzi bezinqumo kumele benze imikhakha engakahleleki ibe nguzakwethu wangempela kunqubomgomo yezentuthuko nokuhlanganiswa e-Afrika. Ngenxa yokuthi ukukhula kwamanje akwanele, inguquko yezomnotho nezenhlalakahle i-Afrika idinga. Izinqubomgomo zomphakathi zizodingeka ukuze kukhuthazwe ukuhlukahluka komnotho, kwandiswe ukuncintisana futhi kukhuthaze imisebenzi eminingi yokudala amathuba emisebenzi emhlabathini wase-Afrika.
 Njengesikhumbuzo, i-IMF ichaze kabusha uhlaka lomkhakha ongakahleleki. Esikhungweni “leli gama lifaka amabhizinisi emindeni akhiqiza inani elithile lemakethe ngaphandle kokubhaliswa futhi ngokubanzi, ukukhiqizwa komhlaba okuvela emisebenzini ekhiqizayo engumsebenzi wamabhizinisi abhalisiwe, kepha angeke yamenyezelwa kuziphathimandla ukugwema imithethonqubo noma izintela, noma ngoba nje akukho emthethweni. "
 IMF, "World Economic Outlook, Ephreli 2018," IMF, ifinyelelwe ngoJuni 22, 2018, https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic- umbono-april-2018.
 UJean-Pierre Cling et al. Umnotho ongakahleleki emazweni asathuthuka (AFD, i-2012).
 DE VREYER Philippe noROUBAUD François, ama-eds., Izimakethe zomsebenzi zasemadolobheni e-Afrika engaphansi kweSahara, I-IRD / AFD, iforamu yezokuthuthukiswa kwe-Afrika (i-Marseille: i-IRD Publishing, i-2013)., P. 11.
 «Ukufaneleka e-Afrika: ukuguqulwa kwepharadigm kuya ekuthuthukiseni amakhono ezobuchwepheshe nezobuchwepheshe | ADEA ”, kuboniswane ngoJuni 20, 2018, http://www.adeanet.org/fr/blogs/la-qualification-en-afrique-changement-de-paradigme-vers-le-developpement-des-competences.
 U-Issofou Njifen, "Ukungaziwa: inqubo entsha yentuthuko nokuhlanganiswa" kusuka ngezansi "e-Afrika", Ukubuyekezwa kwezokuthuthukiswa kwe-Afrika I-26, no I-S1 (s. D.): 21-32, https://doi.org/10.1111/1467-8268.12090.
Ubudala Ezemfundo Library okusha (PDF)
Kuyini ukuzindla okweqile?
Khulula ubuchopho bakho - Idriss Aberkane (Audio)
IMantra - Imibhalo (2019)
Cheikh Anta Diop, ama-Jectanides nama-Hyksos